Dreams Khabar नेविसंघको विवाद मिलाउन निर्देशक समिति संयोजक महतले डाके पूर्वअध्यक्षहरुको बैठक
नेविसंघको विवाद मिलाउन निर्देशक समिति संयोजक महतले डाके पूर्वअध्यक्षहरुको बैठक
असार २१ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघमा देखिएको विवाद समाधानको पहल सुरु गरेको छ । गत पुष १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसकै दिन सतहमा छताछुल्ल भएको विवाद समाधानका लागि कांग्रेसले बिहीबार (आज) नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेसले नेविसंघमा देखिएको असन्तुष्टि समाधानका लागि पूर्वअध्यक्षहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार बैठक आज दिउँसो २ बजे कांग्रेसका सह–महामन्त्री तथा नेविसंघ निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको निवासमा बस्ने छ ।
तर, नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले भने उक्त बैठक अनौपचारिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘‘पार्टीको निर्देशक समितिले सामान्य ढंगले बस्न बोलाएको हो, यसलाई औपचारिकै बैठक भन्न मिल्दैन,’’ उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा तथा सरकारको निषेधाज्ञा लगायतका विषयलाई लिएर जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसी र छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै सडक संघर्षलाई चर्काउन कांग्रेसले नेविसंघभित्रको विवाद समाधान गर्न पहल गरेको बताइएको छ ।
यसअघि बुधबार कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने आन्दोलनमा नेविसंघको संस्थापन पक्ष सहभागी भएको थिएन । नेविसंघको असन्तुष्ट पक्ष लामो समयदेखि संस्थापन पक्षलाई ‘काउन्टर’ दिन समानान्तर ढंगले गतिविधिहरु गर्दै आएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले सरकारद्वारा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध पनि केही साता अघि संस्थापन पक्षको समानान्तरमा सरकार विरुद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु गरेको थियो । नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले संगठनको नेतृत्व मनोमानी ढंगबाट अघि बढेको भन्दै तत्काल महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै गत वैशाखमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।